Pyae Phyo (MMiTD): March 2016
Fb သုံးတဲ့အချိန် ဂိမ်းဆော့နေတဲ့အချိန် တွေဖုန်းလာရင် ခေါ်လာတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖုန်းဘားတန်းပေါ်ကနေ ပေါ်နိုင်မယ့် Lollipop Call Apk
Android OS နှင့် Tablet ချစ်သူများအတွက် မိမိဖုန်း Facebook သုံးတဲ့အချိန်တွေ ဂိမ်းဆော့နေတဲ့အချိန်တွေဖုန်းလာရင် ခေါ်လာတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖုန်းဘားတန်းပေါ်ကနေပေါ်လာမယ့် Lollipop Call Apk လေးပါ ညီတစ်ယောက် တောင်းထားလို့ ရှာဖွေပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူငယ်ချင်းတွေFacebookသုံးတဲ့အချိန်တွေဂိမ်းဆော့နေတဲ့အချိန်တွေဖုန်းလာရင်စိတ်တိုဖို့ကောင်းတာတကယ်ပါအခုတော့ ဒီဆော့ဝဲလေးသာဆောင်ထားလိုက်
အမျိုးအစား: Android free call
အမျိုးအစား: Andriod Video Editor
Posted by Ko Lin 1 comment :
အမျိုးအစား: Android Video Editor
♪ Apple ၏ အကူအညီမလိုအပ်ဘဲ iPhone ကို unlock ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးရာဌာနမှ ထုတ်ပြန် ♫
အမေရိကန်တရားရေးရာဌာနသည် Apple အကူအညီမပါမဝင်ဘဲ iPhone ကို unlock ပြုလုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း တနလာင်္နေ့က ထုတ်ပြန်သွားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အမေရိကန်တရားရေးဌာနအနေဖြင့် လူပေါင်းများစွာ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရသည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း Apple ထံမှ အကူအညီရရှိရန် FBI က ဥပဒေရေးရာအရ အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးမှုများကိုလည်း ရုတ်သိမ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် ကယ်လီဖိုနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဘာနာဒီနိုမြို့ရှိ သေနတ်သမားဖြစ်သူ ဆာယစ်ရစ်ဇ်ဝမ်ဖာရွတ်သည် လူ ၁၄ ဦးကို ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းအသုံးပြုခဲ့သော iPhone အား ထိုးဖောက်ရန် Apple အကူအညီကို တောင်းခံသည့်အမှုမှာ အစိုးရနှင့် ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး နည်းပညာကုမ္ပဏီအကြား အဆုံးသတ်သွားခဲ့သည်။ ထိုအမှုတွင် Apple သည် အာဏာပိုင်များကို ကူညီရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သောကြောင့် တစ်ကိုယ်ရေလွတ်လပ်ခွင့် သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးအကြား မည်သည့်အရာက ပိုမိုအရေးကြီးကြောင်း အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ယခုအခါတွင် ဥပဒေဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများက iPhone ကို unlock ပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် Apple ထုတ်ကုန်များအတွင်းရှိ လုံခြုံရေးစွမ်းရည်အပေါ် မေးခွန်းထုတ်လာကြသလို မရေရာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။ အသစ်ဖြစ်ပေါ်လာသော အခြေအနေများကြောင့် ထုတ်ကုန်ကို ထိုးဖောက်ခဲ့သည့် နည်းလမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရနှင့် Apple အကြား ပဋိပက္ခသစ်များကို ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် အလားအလာရှိသည်။ အစိုးရအနေဖြင့် iPhone ကိုထိုးဖောက်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သော အဆိုပါနည်းလမ်းကို ထုတ်ပြန်ခြင်း ရှိ၊မရှိကို မသိရသေးပေ။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အစိုးက လျို့ဝှက်ထားဖွယ်ရှိသည့် iPhone ကိုထိုးဖောက်ခဲ့သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို သိရှိလိုကြောင်း Apple ၏ရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။
“ဥပဒေရှုထောင့်ကကြည့်ရင် ဆန်ဘာနာဒီနိုအမှုမှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေက တရားရင်ဆိုင်မှုတွေ ပြီးသွားပြီလို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး” American Civil Liberties Union မှ ရှေ့နေဖြစ်သူ အီရှာဘန်ဒါရီက ပြောကြားခဲ့သည်။ အစိုးရအနေဖြင့် iPhone ကိုထိုးဖောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုရာတွင် တွေ့ရှိသည့် အားနည်းချက်နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက် ထုတ်ပြန်ပေးလျှင် Apple အနေဖြင့်အားနည်းချက်များကို ပြင်ဆင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
“သူတို့အနေနဲ့ Apple ကို သတင်းအချက်အလက်ပေးဖို့ ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါမှပဲ ကုမ္ပဏီက ဘယ်အားနည်းချက်ကိုမဆို ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရက အဲဒီ tool ကို လုံခြုံရေးအဆင့် သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် မပြုလုပ်ဖို့ အဆိုပြုပါတယ်” ဟု အီရှာဘန်ဒါရီက ပြောကြားခဲ့သည်။
တနင်္လာနေ့က တရားရုံးသို့ တင်သွင်းခဲ့သည့် စာပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်ပါ စာတွဲတွင် “ယခုအခါ ဖာရွတ်၏ iPhone အတွင်းရှိအချက်အလက်များကို အောင်မြင်စွာ ရယူနိုင်ခဲ့သောကြောင့် Apple ထံမှအကူအညီ လိုအပ်ခြင်း မရှိတော့ကြောင်း” အမေရိကန်တရားရေးဆိုင်ရာဌာနမှ ရေးသားထားသည်။
FBI စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ဖုန်း၏အကြောင်းအရာများကို စစ်ဆေးလေ့လာနေသော်လည်း အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
▼ March ( 429 )
ဖုန်းမှာ ဗီဒီယို နှင့် Movie တွေကို Effects များစ...
ပုံတွေပေါ်မှာ မီးတောက်ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ နှင့်စက...
မိမိ ဓာတ်ပုံနှင့် Mp3 သီချင်း ထည့်ပြီး ဗီဒီယို ...
ဘောလုံးဂိမ်း ချစ်သူများအတွက် PES 2016 Pro Apk +D...
♪ Apple ၏ အကူအညီမလိုအပ်ဘဲ iPhone ကို unlock ပြုလုပ...
♪ ဆန်ဘာနာဒီနို ပစ်ခတ်မှုတရားခံ၏ iPhone ကို FBI ချို...
ပုံတွေကို Hackers Logo တွေကို နှင့် ရိုက်ပေးနိုင...
ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို Hacker မျက်နှာဖုံး ဒီဇိုင...
♪ Marshmallow အခြေခံ MIUI 7.2.8 China stable ROM M...
♪ Root ပြုလုပ်ထားလို့ Root မလိုချင်ရင် (Unroot ပြု...
♪ Mobile Guide Issue Vol-3 ၊ Issue-048 (28.3.16) ♫...
♪ အသွင်ဟောင်းပေမယ့်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းနေတဲ့ iPho...
♪ “16MP Selfie ကင်မရာနဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ပြိုင်ကွင်းထဲဝင...
♪ “Samsung Galaxy A7 (2016)” ♫
♪ Facebook Messenger အတွက် Tips & Tricks များ ♫
format အမျိုးမျိုး တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ - Xilis...
ဖုန်းထဲက Virus ပေါင်းများစွာကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း...
♪ Xiaomi က Mi5Pro ကို ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ရောင်းခ...
♪ “ထားသခင်”လို အလိမ်မခံရအောင် ကာကွယ်ပေးမယ့် လုပ်ဆေ...
Fashion Icon Game [48.4 MB] [apk]
♪ Phone6ကို ပွက်ပွက်ဆူနေသော ကိုကာကိုလာထဲသို့ ထည်...
♪ Facebook မှာ ကိုယ့် Profile ကို Profile Video အြ...
♪ Digital Life Journal Issue Vol-4 ၊ Issue 48 (28....
♪ Vivo က တန်ဖိုးနည်း Y31A ကိုကြေညာ ♫
♪ Google Now အတွက် Pro Tips ( ၈ ) ခု ♫
iROOT v1.8.7.1 (One Click Root)
Oil hunt [36.7 MB] [apk] [Game]
ငါးဖမ်း ဂိမ်းလေး ပါ [57.9 MB] [apk]
Clash of crime: Mad San Andreas (Game 57mb)
iPhone6ကို ပွက်ပွက်ဆူနေသော ကိုကာကိုလာထဲသို့ ထည့်...
Snapdragon 820 ချစ်ပ်ပါဝင်သည့် OnePlus3ကို ဧပြီ ...
ဝန်ထမ်း ငါးဦးလျှင် တစ်ဦးမှာ လုပ်ငန်းခွင်သုံး pas...
♪ MPT က ကြိုသုံးချေးငွေ ၈၀၀ ကျပ်ကို စတင်ခွင့်ပြု ...
သဘာဝကျကျ လေးနဲ့ မိမိဖုန်းမှာ လိပ်ပြာလေးတွေနဲ့ အလှ...
Facebook Version အားလုံးမှာ Video များစွာကို 100% ...
ဖုန်းထဲ့ကနေ Screenshot ပုံတွေကို အကောင်းဆုံးလေး ရ...
Effects များစွာနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ပုံတူ များစွာကို...
ဓာတ်ပုံတွေကို ရယ်စရာ ဟာသ ဒီဇိုင်း များစွာတိုကို အလ...
ဓာတ်ပုံတွေကို Effects ကောင်းကောင်လေးနဲ့ စိတ်တိုင်...
ဖုန်းပေါ်မှာတင် ကျားထိုးမယ် apk 1.8 MB
ဗွီဒီယိုကြည့်မယ် သီချင်းနားထောင်မယ် -VLC for Andro...
ဆိုင်ကယ်စတန့် ဂိမ်း [41.2 MB] [apk]
♪ “ASUS : IN SEARCH OF INCREDIBLE” ♫
♪ Sony PlayStation ဂိမ်းတွေကို မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှ...
Android ဖုန်းထဲ့ကနေ အကောင်းဆုံး Blogger ရေးသားနိုင...
မြန်မာဂိမ်း ချစ်သူများအတွက် ရှမ်းကိုးမီး မြန်မာဂိမ...
ဗုဒ္ဓဘာသာ လူမျိုးတွေအတွက် မြန်မာ တရားတော်များ ကို ...
ဗေဒင်ပညာ ကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မိမိဖုန်းထဲ့ကနေ အလ...
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် မြန်မာ ပဋ္ဌန်း ၂၄ ပစ...
မြန်မာ လူငယ်များအတွက် လေ့လာသင့်တဲ့ သင်္ခန်းစာလေးတွေ...
အလွယ်ဆုံးလေး အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာမယ် နိုင်မယ့် Myanmar...
မြန်မာ အချက်အပြုတ် မျိုးစုံတွေကို ဖုန်းထဲ့မှာသေခ...
ဖုန်းထဲ့ကနေ သရဲ့ ပုံပြင် မြောက်များစွာကို မြန်မာ...
မြန်မာနိုင်ငံက စာရေးဆရာတွေ့ရဲ့ စာပေဟောပြောပွဲအသံ...
♪ သင့်ရဲ့ 3Gအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်သက...
နောက်ဆုံး ဗါးရှင်းဖြစ်တဲ့ - Facebook 69.0.0.26.76 ...
မိမိ အကောင့်တွေကို ဟက်ကာတို့ရဲ့ အနှောင့်အယှက်ကိုကာ...
♪ အခမဲ့ Facebook အသုံးပြုခွင့် ပါဝင်သော မိုဘိုင်းအ...
♪ OPPO F1 Selfie ဘုရင်ကင်မရာဖုန်း၏ Rose Gold Colou...